FAHA-20 TAONAN’NY “CLUB EXPORT REUNION”: Hampiroborobo ny fifandraisan’ireo firenena sy Nosy manodidina | Madatopinfo
FAHA-20 TAONAN’NY “CLUB EXPORT REUNION”: Hampiroborobo ny fifandraisan’ireo firenena sy Nosy manodidina
Homarihina amin’ity taona ity ny faha-20 taona ny “Club Export Réunion”. Tafiditra ao anatin’izany taom-pankalazana izany indrindra no hikarakaran’ny “Club Export Réunion” ny Fihaonana iraisam-pirenena mikasika ny Fampandrosoana lovainjafy na “Rencontres Internationales du Développement Durable (RIDD)”. Any Saint-Denis, Nosy La Réunion no hanatanterahina izany ny 21,22 ary ny 23 Novambra ho avy izao. “Mampiditra ny Nosy anaty lisitry ny ho avy mamirampiratra” no lohahevitra raisina amin’ity andiany fahaenina ity. Firenena 10 no hifandrimbona amin’izany, ankoatra ny La Réunion izay hampiantrano, ao anatiny i Madagasikara, Nosy Maurice, Seychelles, Mozambika, Comores, Mayotte, Kenya, Afrika Atsimo ary ASEAN. Mandritra ireo telo andro ireo, hisy ny fifanakalozan-kevitra mahakasika ny olana ara-toekarena eto amin’ny Ranomasimbe Indiana mba hananan’ireo firenena ireo ho avy mahatehotia amin’ny lafiny fampandrosoana.
Ny tanjona tamin’ity hetsika ity ny hanamafisina bebe kokoa eo amin’ny samy orinasa hitondra mankany amin’ny fampandrosoana. Eo ihany koa ny fanetsiketsehana ireo sehatra ifananankalozan’ny samy tsy miankina, hampitombo ny famatsiam-bola iraisana eo amin’ny samy orinasa ao anatin’ny firenena tsirairay. Manodidina ny 400 ireo mpandray anjara amin’io RIDD io. Hita mandritra ireo fotoana ireo ohatra ny famelabelaran-kevitra, ny atrikasa maro isan-karazany, ny fitsidihan-toerana.
Raha tsiahivina, tamin’ny taon-dasa mihoatra ny 20.000 ireo mpitsidika. Ity hetsika ity izay hiaraha-mientana amin’ny GEM (Groupement des Entreprises de Madagascar) izay tarihin’i Noro Andriamamonjiarison. Raha ho an’i Madagasikara manokana, isan’ny hitondra tombotsoa goavana ity hetsika ity, ahafahana manamafy orina ny fifandraisana amin’ireo firenen-kafa mankany amin’ny fampandrosoana maharitra.